Dagaal culus oo Al-shabaab iyo ciidamada Liyu Polis ku dhexmaray Soohdinta |
— Dagaal culus oo u dhexeeyay ciidanka deegaanka is-maamulka Soomaalida Itoobiya iyo xoogagga Al-shabaab ayaa tan iyo xalay ka socday soohdinta ay gobolka Bakool ka wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya.
Wararka hordhaca ah ee soo baxaya ayaa sheegaya in daaalkaas ay ku dhinteen in ka badan 20-qof, ayna ku dhaawacmeen tiro kontomeeyo ah, iyadoo dhinacyadu ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan.
Inkastoo aan tiro sugan oo ku saabsan khasaaraha dagaalka la hayn, ayaa haddana dadka ku nool deegaannada ku dhow halka lagu dagaalamay waxay sheegayaan in uu dagaalku ahaa mid culus oo ay la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Ciidamadii dagaalku u dhexeeyay ayaa weli kuwada sugan deegaankii u dagaalku ka dhacay, iyadoo dhinac walba uu gurmad gaarayo, waxaana laga baqdin qabaa inuu dagaal kale dhexmaro dhinacyada.
Liyu Polis oo ah ciidamada deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dhawaanaha waxay kula dagalaamayeen gudaha dalka Soomaaliya xoogagga Al-shabaab oo ka talisa deegaanno ka tirsan gobolka Bakool oo xadka xiga.
Al-shabaab weli kama hadlin dagaalkii tan iyo xalay ka socday soohdinta ee ay la galeen ciidamada Liyu Polis ee dalka Itoobiya, waxaana dagaalkan uu daba socdaa dagaallo horay uga dhacay deegaanno ka tirsan gobolka Bakool.